Ndiyikhuphela njani iVidiyo esuka kuTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 432
I-Twitter yenye yezona ndawo zonxibelelwano zaziwayo kwihlabathi. Inika izinto ezininzi ezinomdla kubasebenzisi. Ngeetweets ungasasaza isicatshulwa, imifanekiso kunye nevidiyo. Ke yonke imihla inani labanxulumene nale nethiwekhi liyakhula ngakumbi.
Ukuba ufuna ukugcina olunye ulwazi kwi-twitter, ngakumbi iividiyo, Kuya kufuneka ubhenele kwezinye zoncedo ezikhoyo kumnatha. Ngayo uya kuba neevidiyo kwihard drive yekhompyuter yakho.
Inkqubo yokukhuphela iividiyo kwi-twitter ilula kakhulu. Ukufumana iividiyo ozifunayo, kuya kufuneka ubhenele kwizixhobo ezimbalwa, apho unokukhetha khona ezona zilungele iimfuno zakho okanye uyilo kunye nosetyenziso oluthandileyo.
Amanyathelo okukhuphela ividiyo
Ukusetyenziswa kwamaqonga akwi-intanethi
Ngalo naluphi na uhlobo lwesikhangeli sewebhu, kuya kufuneka ukhangele umxholo wewebhu okhuphelayo umphathi wewebhu. Phakathi kwabaphathi abakhethwayo ngabasebenzisi zezi https://www.downloadtwittervideo.com/es/, https://www.savetweetvid.com/es okanye https://es.savefrom.net/.
La maphepha ewebhu ayilelwe ngonxibelelwano olulula kakhulu, kulula ukuyisebenzisa ngabasebenzisi. Uninzi uya kufumana ibar yomsebenzi kunye ne icon yokukhuphela.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ungene kwi-twitter. Nje ukuba kwenziwe oku, ufumana i-tweet ngevidiyo ofuna ukuyigcina kwaye uye kwibar yomsebenzi. Ikopa i-URL yephepha kwaye uyise kwiphepha lokukhuphela.
Sele kweli phepha, uya kwibar yomsebenzi, ehlala inesaziso "faka idilesi ye-URL ye-twitter." Cola ikhonkco kwaye ucinezele i-icon yokukhuphela.
Imenyu iya kuboniswa ukubonisa izigqibo ezahlukeneyo kunye neefomathi apho ividiyo inokukhutshelwa khona.
Ngokubanzi ifomathi yokukhuphela yi-MP4, kuba yenye yezona zidume kakhulu kubuchule bayo bokugcina iifayile ezinkulu ezinobunzima obuphantsi kunye nesisombululo esifanelekileyo. Ngokumalunga nezigqibo, kokukhona iphakama, kokukhona ubunzima bevidiyo ekhutshelweyo bukhulu.
Emva kokukhetha zonke iinketho, ividiyo iya kuqala ukukhuphela, kwaye xa ukhuphelo lugqityiwe, luya kubanjwa kwifolda yokukhuphela yePC.
Kwelinye icala, ukulungiselela ukukhutshelwa kweevidiyo kwiPC, unokufaka iinkqubo ezisebenza njengabaphathi bokukhuphela ngaphandle kokuya kumaphepha ewebhu. Okona kwaziwayo koku ngaphandle kwamathandabuzo jdonwloader.
Le software inokufumaneka kwiphepha layo elisemthethweni https://jdownloader.org/es/home/index. Es de muy fácil instalación y manejo. Solamente tendrás que abrir el programa, y pegas en el ícono de “añadir enlace” el enlace extraído de la página de twitter tal como se explicó anteriormente.
Isoftware iya kuqala ukukhangela ukufumaneka kwevidiyo. Nje ukuba uqinisekiswe, kuya kufuneka uye kwi "link grabber" ithebhu.
Apho uskrolela kwikhonkco, cofa ekunene kwaye ukhethe "ukuqala ukhuphelo" kwimenyu eyehlayo. Ngokukhawuleza, ukhuphelo luya kuqala kwaye ividiyo ibekwe kwifolda efanelekileyo.
1 Amanyathelo okukhuphela ividiyo
3 Sebenzisa iinkqubo